FAQ | Hangzhou Dro Textile Co., Ltd.
Olefin / PP lamba
100% Vahaolana vita amin'ny lamba vita amin'ny poly
Lamba taffeta / Pongee / Satin
Lamba vita pirinty
Lamba vita amin'ny voninkazo
Lamba andiana andiana ravina
Hamarino Series Fabric
Lamba voninkazo vita amin'ny voninkazo Ham
Lamba sarimihetsika camouflage
Sariitatra Series Series
Dot Series lamba
Lamba vita amin'ny andiam-jeometry
Ahoana no hahavitako haingana ny vidiny?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanontanianao anao.
Inona ny MOQ?
Raha ny tena izy, ny MOQ dia miankina amin'ny volanao. Ny stock dia afaka manaiky kaomandy kely.
Azonao atao ve ny manamboatra ny volonay na mametraka ny sary famantarana amin'ny vokatra?
Eny, manana ny departemantan'ny R&D matihaninay manokana izahay, afaka manamboatra ny volavolanao manokana izahay na mametraka ny sary famantarana amin'ny vokatra, azafady alefaso ny volavolanao na ny fanontanianao amin'ny mailaka anay (Whatsapp na Skype). Azonao atao ihany koa ny mandefa ny santionanao aminay.
Afaka mahazo santionany ve aho?
Ny santionany dia mety mila famokarana 5 ~ 15 andro.
Raha misafidy ny santionany misy anay fotsiny ianao. afaka mandefa santionany aminao izahay ny ampitso, afaka mandefa anao santionany maimaimpoana izahay ary ny sarany miaraka amin'ny express dia hotakina, fa haverina aorian'ny filaharana.
Inona ny ora fanaterana lamba Minimatt?
Ny entana dia mila 10-30 andro hanaovana, miankina amin'ny habetsany, ary ho famokarana aorian'ny fandraisana petra-bola.
Momba ny fandoavam-bola?
Ho an'ny sarany santionany na vola kely dia azonao atao ny mandefa izany any amin'ny kaonty paypal ho anay. Ho an'ny baiko ara-dalàna, dia ekenay ny petra-bola T / T 30%, ny fandanjana aloany amin'ny kopian'ny B / L.
D / P, L / C dia azo ekena ihany koa, saingy mazava ho azy fa aleontsika T / T, izay mora kokoa ho antsika roa tonta.
Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasanao na ny biraonao?
Azo antoka, tongasoa amin'ny fotoana rehetra. Azontsika atao ihany koa ny mikarakara ny fakana ao amin'ny seranam-piaramanidina sy ny gara Hangzhou Xiaoshan.
Huitong Building, Jinhui Road, Beigan Street, Xiaoshan, Hangzhou, Sina